မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: MMITPROS SG Dec Meet-up
MMITPROS SG Dec Meet-up
MMITPROS SG Dec Meet-up ကို ဆန်တိုဇာမှာ sunday နေ့လည် ၃နာရီတဲ့။ ဒီတစ်ခါ ဒီevents လေးကို သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ကိုဂျွန်မိုး မတ်ဆေ့ခ်ျပို့မှ RSVP မှာ confirm လုပ်ရင်း ကွန့်မန့်ရေးခဲ့တာ။ နေ့လည်ထမင်းစားပီးချိန်မှာတော့ ဖုန်းဆက်စရာရှိတဲ့သူတွေဆီဖုန်းဆက်ပြီး vivo city မှာစောင့်မဲ့အကြောင်းချိန်းချက်ပြီး ပြင်ဆင်။ တကယ်တမ်းအဲဒီကိုတော့ ကိုယ်က နောက်ကျမှ ရောက်သွားတယ် (နဲနဲနောနော ၄၅မိနစ်တောင်မှ) monorail လက်မှတ်အဆင်သင့်ဝယ်ပြီး စောင့်နေပေးတဲ့ အာကာမျိုးနဲ့ အိဝေဖြိုးတို့ ကိုကျေးဇူးလဲတင် အားလဲနာပ။ beach station မှာ ရောက်နှင့်နေတဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့တော့ လေးနာရီတောင်ထိုးလုပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန်ပြောလဲ ခံပမယ်။(haborfront MRT ထဲမှာ ရွာလည်သွားလို့ဗျို) palawan beach မှာ koufu ဆိုင်လေးမှာ အရင်ထိုင်တယ် ဒါပေသိ အအေးပဲမှာသောက်ရတယ်။ outside foods not allowed ဆိုတော့ pork sticks တွေ အလဟဿဖြစ်သွားမစိုးလို့ နောက်ထပ်နေရာကို သွားရှာတယ်။ တွေ့တဲ့နေရာသစ် မြက်ခင်းစိမ်းဘက်ကို ဆက်သွားပြီး အဲဒီမှာတော့ တုတ်ထိုးတွေ ပြိုက်ကနဲကုန်အောင် အားပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်စသတ်ကိုလဲ အိဝေဖြိုးနဲ့ မယ်လိုဒီမောင် (အပျိုကြီးဖြစ်လဲဖြစ်ပစေ ဆိုပြီး အနစ်နာခံလို့) အောင်စည်သိမ်း ညိမ်းပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမြက်ခင်းက ခြင်လဲကိုက်တယ်၊ စကတ်အတိုဝတ်ထားမိလို့ အင်း...(ကိုက်တယ်..ပဲဆိုကြပါစို့) အဲဒါနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြဖို့ ကြိုးတံတားကိုဖြတ်ပြီး မျှော်စင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီမှာ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်တယ်၊ စကားတွေလဲ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရောက်တော့ meet up မှာ လာတဲ့သူနည်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲ စပြောဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့တခြားပြောဖြစ်တဲ့ ရောက်တတ်ရာရာတွေကတော့ လတ်တလော ကျမသိချင်တဲ့ CIW certificate အကြောင်း၊ ဟော့နေတဲ့ topics ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လာလုပ်ြဖစ်သူတွေအကြောင်း(အဲဒါ..အနည်းအကျဉ်းနော်)၊ ပြီးတော့ မြန်မာဖွန့်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး mymyanmar unicode 3က windows မှာရပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်း၊ နောက်ပြီး ဖိုရမ်ထဲက moderate လုပ်သင့်တဲ့ topics တို့ event တို့အကြောင်း စသဖြင့်ပြောဖြစ်ရင်း ညနေပြန်ချိန်ရောက်တယ်။ ၇နာရီလောက်မှာ ပြန်လာဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ အပြန်မှာ သစ်ပင်တွေမီးထွန်းထားတာကို တောသူမြို့ရောက် ငေးမောရင်း မလှမပ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရင်း နာရီကြည့်ဖို့တောင် မေ့သွားလို့ဗျို။(palawan beach ကကြိုးတံတားပေါ်မှာ)Credit: snap shot လေး တကူးတက ရိုက်ပေးတဲ့ ချစ်ကိုကြီး MrDBA ကို သိုင်းခရုမီလီယံဗျို
Aye Myat Myat Ko
Karaweik ကရဝိတ် 妙声鸟 Alvin (Sumedha)
Nice photo of you at that bridge in Sentosa :) Glad to see you happy in Sg.
December 30, 2008 at 6:07 AM
i can't read your post as all are illegal with small squares. Can you post in english as well?
ဓါတ်ပုံတွေ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံတင်ပြီး ရုပ်ရှိ၊ ရေလျှံ အောင်ပွဲခံနေကြတယ်ပေါ့လေ။
မမီ .. အနော် လိပ်စာပြောင်းသွားပြီ။
January 5, 2009 at 2:50 PM
The Web Show (My Web My Style) 2008
Naing & Lin အတွက် မင်္ဂလာဆုတောင်း
သူများအကြောင်းလဲ မပြောတတ်ပါ..စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ....
နှစ်၆၀ပြည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ အခွင့်အရေးနေ့ သဘော...
သူများဟာလည်း မခိုးနဲ့ ကိုယ့်ဟာလည်း အခိုးမခံရစေနဲ့